साउन महिनामा यी राशिहरु हुँदैछन् मालामाल? मासिक राशिफल हेर्नुहोस् – Hamro24News
साउन महिनामा यी राशिहरु हुँदैछन् मालामाल? मासिक राशिफल हेर्नुहोस्
July 16, 2021 adminLeaveaComment on साउन महिनामा यी राशिहरु हुँदैछन् मालामाल? मासिक राशिफल हेर्नुहोस्
मेषः उत्साह बढ्नेछ । मित्रवर्गसित भेटघाट गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । परिवारका सदस्यहरूसित वैचारिक मतभेद हुुनसक्छ । अपजस आइलाग्ने सम्भावना छ । कतिपय कुुरामा छोराछोरीसँग पनि विवाद सिर्जना हुनेछ । १५ गतेपछिको समय अनुकूल रहनेछ । महिनाको अन्त्यमा परिवारका सदस्यहरू सहयोग गर्न प्रयत्नशील रहनेछन् ।
वृषः प्रसन्नता छाउनेछ । शरीर स्वस्थ रहनेछ । आर्थिक पक्ष सबल हुनेछ । आफन्त एवं इष्टमित्रसित भेटघाट हुुनसक्छ । पारिवारिक खुुसी बढ्नेछ । केही समयका लागि परिवारसँग कतै घुम्न जाने अवसर प्राप्त होला । नवविवाहितहरूले पनि घुमफिरका साथै माइतीमा समय बिताउने अवसर पाउनेछन् ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
कर्कटः कामकाजमा व्यस्त हुनुपर्ला । कुुनै कामविशेषले यात्रा गर्नुुपर्नेछ । मौसम परिवर्तनका कारण स्वास्थ्यमा समस्या देखापर्नसक्छ । दाम्पत्य जीवन सुुखमय रहनेछ । पारिवारिक सुख मिल्नेछ । छोराछोरीको खुसीका निम्ति केही अतिरिक्त खर्च हुनसक्छ । दम्पतिमा इच्छा एवं आवश्यकता बुझी कार्य गर्ने प्रयास हुनेछ ।
सिंहः व्यक्तिगत कार्यमा सफलता मिल्नेछ । सहयोगी हातहरू पछि हट्न सक्छन् । कुुनै–कुुनै कार्यमा भने अपेक्षाअनुुरूप सफलता नमिल्नसक्छ । महिनाको पूूर्वाद्र्धमा दाम्पत्य जीवनमा खटपट परे पनि उत्तराद्र्धमा भने सम्बन्ध राम्रो रहनेछ । विशेष सामग्री किनमेल हुनेछ । कहीँकतैबाट आकस्मिक उपहार प्राप्त हुनसक्छ । पारिवारिक सुख मिल्नेछ ।
तुलाः विशेष कार्यमा सफलता मिल्नेछ । विभिन्न माध्यमबाट सहयोग प्राप्त होला । घरमा कुुनै सामग्रीमा हेरफेर हुुनसक्छ । माइती पक्षसँग भेटघाट गर्ने मौका मिल्नेछ । जीवनसाथीबाट अपेक्षित सहयोग एवं सद्भाव पाइनेछ । आकस्मिक उपहार प्राप्त हुने सम्भावना पनि छ । महिनाको पूर्वाद्र्धमा अनपेक्षित विवादको योग छ ।
धनुः धार्मिक कार्यमा मन जानेछ । कुनै कुुराले मनमा एक प्रकारको डर उत्पन्न हुुनसक्छ । आर्थिक कारोबार गर्दा सजग रहनुहोला । व्यावसायिक क्षेत्रमा बाधा उत्पन्न भए पनि आर्थिक पक्ष सबल रहनेछ । पारिवारिक, सन्तान, दाम्पत्य एवं मित्र सुख प्राप्त हुनेछ । आफ्नो जोडीको मुडलाई ख्याल गरे सम्भावित विवादबाट जोगिन सकिन्छ ।
मकरः यात्रा हुुने योग छ । स्वास्थ्य स्थिर रहनेछ । परिवारका सदस्यहरूको स्वास्थ्यमा समस्या देखापर्नसक्छ । महिनाको पूर्वाद्र्धमा कुनै कुराले मन चञ्चल बनाउने छ भने कसैसँग भना भन पनि हुनसक्छ । उत्तराद्र्धपछि सबै कुरा सामान्य हुनेछन् । मनमा भएको बोझ हट्नेछ । पारिवारिक सुख मिल्नेछ ।
कुम्भः स्वास्थ्यस्थिति राम्रो रहनुका साथै शरीर पनि फुर्तिलो हुनेछ । आफ्नो इच्छानुुरूप काम गर्ने मौका मिल्नेछ । कसैले औंला ठड्याउने प्रयास गरे पनि त्यस्ता व्यक्ति असफल नै हुनेछन् । सबै बोझ हटेर मन चङ्गा रहनेछ । वादविवाद हुने योग भएकाले सतर्क रहनुहोला । बोली एवं व्यवहारमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने समय छ ।
धन कमाउन इराक गएका एक नेपाली युवाको दुख’त नि’धन !